AMA M GEMER NA, ASUSU M – Contos de Sacanagem
← EU SÓ SEI GEMER ASSIM, NA MINHA LINGUA
איך קען נאָר וויסן אַז אין מיין שפּראַך →
AMA M GEMER NA, ASUSU M
Mgbe ezinụlọ anyị rutere n’obere obodo ebe anyị bi taa, ebe a na Brazil, si Kufstein, Austria, ndị agbata obi ọhụrụ anyị hụrụ anyị ka ànyị bụ ndị obodo mara mma. Anyị ghọrọ, etiti oge nlebara anya nke onye ọ bụla.
Na mbido anyị nwere ike ịchọpụta n’ụjọ dị na akparamaagwa gbasara anyị, ndoputa ụfọdụ, mmegharị atụ atụ, n’agbanyeghị na anyị chọpụtara na ha mere nnukwu mbọ ịghọta anyị. Ma, nke nta nke nta, anyị ghọrọ ndị nkịtị ma bụrụ ndị ama ama, na-akwụsị ịhụ anyị dị ka ndị ala ọzọ ma ọ bụ dị ka a ga-asị na anyị bụ ndị ọbịa.
Ezinụlọ anyị nwere mmadụ ise: Andreas na Alina, ndị mụrụ anyị, mụ, aha m bụ Emma, ​​Katharina na Clemens, ụmụnne m. Papa m bụ abụba, nwoke dị ike nke na-achị ọchị n’ihe ọ bụla. Ndị agbata obi anyị chere na aha ya dị iche na iche na mbụ, ha wee chịa ọchị mgbe ọ kpachara anya kpọọ “as”. Ọ kwuru “Andreaass”. Nne anyị, Alina toro ogologo ma nwee ntutu na-acha ọbara ọbara nke a na-ezobe ya mgbe ụfọdụ n’okpuru ịchafụ ọ na-eyi n’isi ya.
Mụ na Katharina, kemgbe anyị rutere, anyị so n’otu ndị na-eto eto anyị na ha nọ mgbe niile.
Clemens, maka mmasị football na ịdị mma na bọl, ghọrọ akụkụ nke otu egwuregwu bọọlụ ngwa ngwa ma nwee ike ịhụ ya kwa ụbọchị na-egwu bọl na n’okporo ámá. Ọ bụ ezie na anyị bụ ndị Ọstrịa, anyị hụrụ ụzọ ngwa ngwa iji nọgide na-enwe mmekọrịta na onye ọ bụla bi n’obodo ahụ. Anyị mụtara okwu ụfọdụ na Portuguese, ha na-amụta okwu ụfọdụ na German na, na njedebe, anyị jisiri ike mee ka anyị ghọta.
Mụ na Katharina na ụmụ agbọghọ nọ n’ọgbọ anyị kesara ohere ụlọ akwụkwọ ahụ na ọ bụ ezigbo ọdịiche. Ọ bụ ezie na anyị mara mma, anyị abụọ bụ ndị na-acha ọcha na ndị na-acha ọcha, nwere oke uhie uhie, dị ka a ga – asị na anyị na – eme ihere mgbe niile maka ihe, ebe ndị ọzọ niile na – acha aja aja, nke nwere obere ọchịchịrị. N’ezie, ọdịiche a dị n’etiti anyị n’oge na-adịghị anya mere ka ụfọdụ ụmụ okorobịa chọọ ịkpa.
Achọpụtara m na otu onye n’ime ha, Edward, na-enwe mkpasasị uche mgbe nile mgbe m nọ ya ma ọbụnakwa chere na ọ dịka ọ na-enwe obi-anụrị ọnụnọ m. Achọpụtara m na Katharina, n’oge a, nwere naanị nwa nwoke aha ya bụ Alexandre, Alê na n’oge na-adịghị anya ha malitere mbedo.
Enweghị njikọ ọ bụla dị mkpa, Edward malitere imepụta ọnọdụ ebe ọ ga-anọrọ m naanị m. N’oge ndị a, anyị abụọ ga-atụgharị iji ghọta onwe anyị, jiri okwu ma ọ bụ mmegharị ahụ. Akụziri m ya okwu ụfọdụ n’asụsụ German ma n’otu oge ahụ amụrụ m ụfọdụ okwu n’asụsụ Portuguese.
Otu abalị, mgbe anyị nọ n’ogige nke square ahụ, ahụrụ m nnukwu obe dị ogologo, ihe ọkụ niile na-enwu gbaa. Ahụla m ala ahụ tupu oge ahụ, mana elebaraghị m anya. Edward gwara m na ọ bụ Morro do Cruzeiro na a bufekwara obe ahụ site n’obodo ahụ gaa ebe ahụ, n’ubu ndị okwukwe Chọọchị Katọlik kwesịrị ntụkwasị obi, dị ka ụtụ nye Kraịst akpọgidere n’obe nakwa na site ebe ahụ mmadụ ga-ahụ obodo ahụ dum, n’okpuru. M kwere ya nkwa na ọ ga-akpọga m ebe ahụ.
N’echi ya, anyị gara Morro do Cruzeiro ozugbo anyị risịrị nri ehihie. Ozugbo anyị hapụrụ obodo ahụ, na-eje ije, Edward jidere aka m wee soro aka na njem ọzọ.
Site n’elu Morro do Cruzeiro, ekpughere obodo ahụ dum n’okpuru anyị. Anya ahụ dị egwu. Ebube. Mma mma mma ntre. Amaghị m ihe mere m, makụrụ Edward ma susuo anyị ọnụ. Ya mere, makụọ m, ya na obere nnụnnụ titịa m n’ahụ ya, echere m na ọ na-esiri m ike, na m nwere ike ịdị ka m chọrọ ịrapara. Ewepụghị onwe m pụọ, agbadaara m aka ma metụ ya n’elu ogologo ọkpa m. Ọ dị ka mast nke na-ebili m. Ebuuru m ya pịị. Enweghị egwu ọ bụla, jiri mmegharị ahụ dị mma, m hulatara wee mepee uwe ogologo ọkpa ya wee mee ka ike ahụ, ọmarịcha oke ọkpa pụta, ọ dị ka ọ bụ nnukwu ọgwụgwọ. M ji nwayọ na-ewebata ya n’ọnụ m ma m na-ackingụ, na-amị ma na-ackingụ ara, nwa oge, wepụ ya ma mee ka ọ banye n’ọnụ m ọzọ. Nnukwu, oké, na-ekpo ọkụ, na-atọ ụtọ. Anọ m na-ackingụ ara mgbe m na-akụ wank. Tupu ọ bịa, ewepụrụ m ọnụ ọkpa ya, yipụ pant m ma dabere na ọtụ m wee bido ime onwe m agha megide ya. Aghọtara m na Edward fọrọ nke nta ka ọ bụrụ agụụ na-agụ ya na mgbe m metụrụ ọkpa ya aka n’ọtụ m, ọ mere mmegharị dị ka a ga – asị na ọ chọrọ ịbanye m, jigide oke ọkpa ahụ n’ime m. Mgbe ahụ, ọ tụgharịrị m n’azụ ya, makụọ m n’azụ wee malite iji mkpịsị aka ya na-agba ọsọ m, na-enwu enwu, ruo mgbe m na-enweghị ike ịnara ya ma malite ịtụgharị gburugburu, na-eme mkpọtụ, na ọtụ m niile mmiri, Crazed, Ajụrụ m Amaghịdị m otú e si ekwu okwu. M gwakọtara ihe niile n’elu ebe ahụ, ebe ọ na-arapara dick m nke ọma, na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ.
Ka m na-enwe mmetụta n’ike mmụọ nsọ ya na-emetụ m aka ma na-abanye ruo mgbe ọ kwụsịrị n’ime m, ana m ama jijiji ịnyịnya ibu m, na-azụ ma na-akwagharị ya ka ọ na-araparakwu. Amaghịdị m otú m si tachie obi. O tiri mkpu ma kwaa akwa. M kwara ákwá ma tie mkpu mgbe m jidere nnukwu ụgbọ mmiri ahụ iji kwado onwe m ma nwee ike ịkwaga ọzọ ka osisi ahụ ghara ịpụ m. Enweghị m ike iwe ya ọzọ Ich halte es nicht mehr aus me come Iss mich now jetzt Chukwu m meine Güte my love meine liebe not to continue nicht zu Geht weiter delights freuden. Mgbe o mechara bịa, abịara m ọtụtụ oge. Ọtụtụ mgbe.
Nke a bụ oge mbụ mụ na Edward gwụrụ Site n’ụbọchị ahụ gaa n’ihu, anyị na-achọta oge na ebe dị mma karị ebe anyị ga-esi na-akawanye njọ. Achọghị m ịma ihe m kwuru mgbe ọ na-agbagha m. Naanị m na-echegbu onwe m banyere ịkwa ákwá, A sị ka e kwuwe, naanị m maara otú ị ga-esi kwaa ákwá otú ahụ, n’ire m.
Nyere m aka ịnọgide na-ebipụta akwụkwọ m. Nweta ha na HotMart:
SITE NA HA
CONSENOR – Ulo Ulo Oma
Ha (akụkọ ifo banyere ncheta mmekọahụ ha)
SITE ha (Erotic akụkọ ifo banyere mmekọahụ na-echeta ha)